Messi: Argentina Horumarka Wey Sii Kordhin Kartaa
HomeWararka MaantaMessi: Argentina Horumarka Wey Sii Kordhin Kartaa
Xidigii guusha u horseeday qaranka Argentina ee Leonel Messi ayaa ku adkaystay in xulkiisu wali haysto wakhti uu isa sii horumariyo kadib guushii nafla caariga ahayd ee ay xallay 2-1 ka kaga adkaadeen Bosnia & Herzegovina.
Alejandro Sabella ayaa ku bilaabay xulkiisa khadka difaaca u badan ee 5-3-2 isla markiibana arkay natiijo wax ku ool ah kadib markii uu Sead Kolasinac goolka iska dhaliyey, laakiin wixii intaa ka dambeeyey Argentina wey baaxaa dagaysay markaas oo qaybtii hore sidaas ugu dhamaaday , tababaruhuna isbedel xaga shaxda ah uu soo sameeyey.
Qaranka lagu naanayso La Celeste ayaa ciyaarta qaybtii dambe soo bandhigay qaab ciyaareed fiican, taas oo suurto gallisay in Messi goolkii labaad u dhaliyo ka hor intii aanu Vedad Ibisevic goolka madiga ah ee Bosnia ka daba keenin.
“Bosnia waa xul wanaagsan, anaguna waxaanu haysanaa wakhti aanu isbedel fiican ku samayno kooxda, laakiin arinta muhiimka ahi waxay ahayd inaan kulanka koowaad saddexda dhibcood qaadano,” ayuu ku yidhi Messi , saxaafada.
“Qaybtii hore waxaanu ahayn kuwo difaac u badan, taas ayaana na yara kala daadisay oo dib u dhac ku keentay weerarkayagii.
“Goolkii labaad wuxuu ahaa mid qof kastaa nafis ku dareemay , xataa anigu aan ku nafisay waayo wey fiican tahay inaad goolal dhalisaa.”
Kumanaan taageerayaasha Argentina ah ayaa soo buux dhaafiyey garoonka Maracana stadium ee caasimada Rio de Janeiro oo ciyaartu ka dhacaysay, kuwaas oo si weyn ugu riyaaqay una dhawaaqayay Messi markii uu goolka dhaliyey ee xaga tarabuunka u cararay.
Laacibkan No.10 ka ahi waxaanu shaki kaga jirin taageero badnida uu haysto, waxaanu ku adkaystay inuu diirada ku hayo ku guulaysiga Koobkan ee marka la gaadho July 13 Keeda iyo Isla Garoonkan Maracana.
“Gegida Maracana waa mid heer sare ah, Waxaanan shaki igaga jirin inay sidaas u soo buux dhaafin doonaan, Waanu sii wadaynaa shaqada ka dhabaynta riyadayada.”
Barcelona Oo Ku Guulaysatay Koobkeedii Shanaad Ee UEFA Super Cupka
Messi oo 2 bilood u jiifi doona dhaawac jilibka ka soo gaadhay ciyaartii Maanta